Serivisy - Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd.
Fanavaozana haingana ny vokatra
Taorian'ny fivoarana haingana 10 taona, dia manangana ekipa mpanamboatra barbecue matihanina iray izahay. Tao anatin'ireo taona feno lolom-po ireo, dia nanamboatra singa vaovao izahay miaraka amin'ny famolavolana ivelany Gas & Charcoal grill.“TSY MISY ATAO” izany no tiantsika hanana.
Araho ny fotoana, araho ny fitakian'ny tsena, ary mamolavola vokatra vaovao kokoa mifanaraka amin'ny tsena.
“Ny mpanjifa aloha” no fitsipika fototra ho antsika.
Amin'ny maha-orinasa azy, ny fanaovana izay ilain'ny mpanjifa no mason-tsivanay, ary ny fampivelarana izay heverin'ny mpanjifa fa tari-dalana amin'ny fampandrosoana.
Miara-miasa akaiky aminao, ny mpamorona anay dia handinika ny fironana mahandro. Ny zavatra rehetra mety hisy fiantraikany amin'ny traikefan'ny mpampiasa dia raisina amin'ny fiheverana ny famolavolanay.
Fantatray ny fandaharam-potoananao tery amin'ny fitondrana vokatra vaovao eny an-tsena.
Miaraka amin'ny ekipan'ny mpanao asa tanana mahay sy andiana milina teknolojia avo lenta, afaka mandefa anao ao anatin'ny fotoana fohy ny santionany.
Mba hanampiana anao hamoaka tsara kokoa ny vokatrao eny an-tsena, dia manome toro-hevitra momba ny fonosana sy torolalana mifototra amin'ny teti-bolanao, ny mombamomba ny marika ary ny fepetra takian'ny tsena.
Raha mila fanampiana ianao amin'ny fampitana ny fampiasana sy fikojakojana ny grille barbecue amin'ny fonosanao, dia vonona ny hizara amin'ny ekipanay manam-pahaizana manokana. ianao.
Tohano ny fisafoana entana
Ny fatana barbecue na fatana entona rehetra dia mandalo amin'ny fisafoana lalina ao an-trano alohan'ny fanaterana. Saingy mbola mankasitraka ny fisafoana eny an-toerana na avy amin'ny antoko fahatelo izahay.
Ankoatr'izay, manolotra fanohanana fanaraha-maso entana izahay amin'ny fandefasana sary sy horonan-tsary amin'ny antsipiriany, mba hahafahanao mijery ny vokatrao toy ny hoe tao amin'ny orinasanay ianao.